जीवनको सानो भन्दा सानो पल पनि मुल्यांकन छन – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today १८ माघ २०७७, 8:28 am
पहिलो पल्टनै मानीसको बोली र व्यबहारले थाहा हुन्छ उसलाई मनमा सजाउने कि फ्रेममा,आफैं सोच्नुपर्छ!
खुसीहरु हराएको हुदैनन् जो खोज्दैमा पाउदैन, खुसीहरु त आफैं भित्र हुन्छ जो चिन्नु सकेमा मात्र पाइन्छ!
यदी आफुले आफैंलाई सच्चा प्रेम गर्छौं भने अरुलाई पिडा र चोट दिन्नु सक्दैनौं!
इज्जत र प्रेमको हकदार उसैलाई बनाउनु होस् जसले तपाईंको हरेक दुख र सुखमा साथ दिन्छ स्वार्थी मान्छेले त इज्जत लुटेर बोल्नु नै छोड्छ!
पैसाले भौतिक आवश्यकता पुरा गर्छ तर भावनात्मक कुराहरु पुरा गर्नुलाई माया चाहिन्छ!
जिन्दगी यस्तो होस् घृणाले भरिएको जीत भन्दा माया र प्रेमले भरिएको हार होस्।
सम्बन्ध कहिल्यै पनि मीठो आवाज अथवा सुन्दर मुहारले टिक्ने हैन, त्यो टिक्छ त सुन्दर हृदय र कहिल्यै नटुट्ने विश्वासले!
जसरी बादलभित्र पानीको थोपाहरू देखीदैनन् ठिक त्यसैगरी, जबसम्म तपाई अगाडी पुग्नुहुन्न हजारौको भिडमा देखिदैनौ।
कोही तपाईलाई तपाईले दिएको त्यो दुखको कारण याद गरोस, यो भन्दा राम्रो त उसले तपाईलाई यादनै नगरोस!
केही मात्र यस्ता छनः जुन आफ्नो आँखाले देख्छन् अनि आफ्नो हृदयले महसुस गर्छन्!
जीवनको सानो भन्दा सानो पल पनि मुल्यांकन छन्, जसलाई करोडौंको धन सम्पत्तिले पनि प्राप्त गर्न सकिदैन!
जब तपाई आफैंमा बेइमानी बन्नु हुन्छ, भने अरुले झन् धेरै तपाईंलाई बेइमान बनाइ दिन्छ!